OweKhumbul'ekhaya umangazwa yivideo ngohlelo
UMETHULI weKhumbul'ekhaya u-Andile Gaelesiwe omangele ngamavideo asezinkundleni zokuxhumana ngohlelo Isithombe: Instagram
BONGIWE ZUMA | May 12, 2020
UMANGAZWA ukusabalala kwamavideo angelona iqiniso ngohlelo lwakhe umethuli wohlelo oluhlanganisa imindeni edukelene. U-Andile Gaelesiwe ongumethuli weKhumbul' ekhaya edlala kuSABC 1 uthe bantu abakholwe abakubona kuthelevishini kuphela. Lokhu kulandela ukusabalala kwama-video nezithombe azithunyelelwa ngabantu mayelana nalolu hlelo.
U-Andile usho kanje kunane video yakamuva yebhugu elizibiza ngoKing Nuba owaziwa ngelika Deejay. Leli bhungu livela lithi libhalele lolu hlelo ngoba lifuna ukufuniswa isihlobo thizeni kodwa elinganalo ulwazi lokuthi siwubani igama. Lokhu sekuphenduke ihlaya ngoba abantu banembuzo emingi yokuthi ngabe saqoshwa kanjani lesi siqephu ngoba liyabonakala ukuthi lizididekele leli bhungu.
U-Andile uthe uyabona ukuthi njengoba kuyisikhathi sikathaqa abantu banesikhathi esiningi nokubenza basabalale ngomqondo bagcine sebehlanganisa izinto ezingakaze zenzeke. "Ngimangazwa ukuthi nami kuthiwa ngiyavela lapho. Sekukhona nokunye engikuthunyelelwe kukhona okhala ngokuthi ukhumbule utshwala. Bayazidlalela abantu, phela banesikhathi sonke njengoba besahleli emakhaya. Angiwazi lama video okukhulunywa ngawo ngicabanga ukuthi bayazihlanganisela ngendlela yabo benzela ukufaka -YouTube," kusho u-Andile ephela insini.
Yize ibika kuyilona impela futhi no-Andile emethula ngohlelo lwakhona uDeejay, kodwa okumangaza abantu abaningi ngale video nokwenza ibonakale ukuthi inogcobho ukuvela kwenzinkukhu. Lezi zinkukhu aziveli nje zidlula kodwa zithathwa zichanasa egcekeni bese kugxilwa kuzona nokuyinto engenzeki kulolu hlelo.